महाकाली सन्धिको विवाद जटिल मोडमा- भारतले यसरी निहु खोज्न थाल्यो ! « Pana Khabar
महाकाली सन्धिको विवाद जटिल मोडमा- भारतले यसरी निहु खोज्न थाल्यो !
समय : 10:37 pm
”महाकाली सन्धिअनुसार आयोग गठन हुन नसक्नुमा दुवै देशका राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर नभएर हो ।
राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, मुख्य सचिव”
”आयोग बनेको भए सन्धिका प्रावधान कार्यान्वयनमा सहज हुने थियो । सन्धिका व्याख्यामा विवाद उत्पन्न भए समाधान खोज्ने प्रयास हुन्थे , डा.द्वारिकानाथ ढुंगेल, तत्कालिन जलस्रोतसचिव”
प्रकाशित मिति २०७४ भदौ २८ ,बुधबार